အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျဘူး | Local Resources Centre
အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျဘူး
အပျို ၊ လူပျိုများပင် မိမိရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ပေါ်လာရန် အသဲအသန်လုံးပမ်း နေရသော ယနေ့ခေတ်တွင် ‘မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ၊ မလုပ်နိုင်လောက်ဘူး ၊ မရလောက်ပါဘူး’ ဆိုသော ‘ဘူး’ ပေါင်း သောင်းရှစ်ထောင်ကို ဘေးခေါက်ရင်း ပျင်းပျသော ဆန္ဒတစ်ခုတည်းကို အရင်းတည်ကာ ကြိုးစားရုန်းကန်နေသော အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကရင်ပြည်နယ် ၊ သံတောင်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သူမသည် နေ့စဉ် သူမနေထိုင်ရာ ညောင်ပင်စခန်းကျေးရွာမှ သင်တန်းတည်ရှိရာ ၁၃မိုင်ကျေးရွာသို့ မိနစ် ၄၀မှ ၅၀ကြား မငြီးမငြူ ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်း ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Naw Caroline learning to sow in Thantaunggyi vocational training centre, Kayin State
သူမ နံမည်မှာ နော်ကယ်ရိုလိုင်း ဖြစ်ပြီး စက်ချုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ သူမဘဝ၏ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငြား နေထိုင်သော ရွာမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလှသည်က တစ်ကြောင်း ၊ ရွာတည်ရှိနေသောနေရာမှာ ခေါင်ခိုက်လှသောကြောင့် သူမ၏ အိပ်မက်များ ကာလတစ်ခုအထိ တိတ်ဆိတ်ခဲ့ရသည်။ အိမ်ထောင်ရက်သားနှင့် ဖြစ်လာသောအခါ သာသနာလုပ်ငန်းများ ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရင်း သူမအိပ်မက်များသည် ရှိခဲ့သည့်သယောင်ပင် မမှတ်မိလာတော့ကြောင်းကို “အိပ်မက်စိတ်ကူးလည်းရှိထားတယ်ပေါ့နော်။ စက်ချုပ်သင်တန်းအရမ်းလည်းတက်ချင်တယ်။ သို့ပေသော်ငြားလည်း ကျွန်မတို့က အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့သားသမီး ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ တခြားအပြင်မှာ သင်တန်းတွေဘာတွေတက်မယ်ဆိုလည်း အသွားအပြန်ဆိုလည်း အဆင်မပြေဘူး” ဟု နော်ကယ်ရိုလိုင်းမှ ဖြေကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် စက်မှုလက်မှုနှင့် စက်ချုပ်သင်တန်း အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်သော သတင်းစကားကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိခဲ့သည်။ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်လု အိပ်မက်များ တဖန်ပြန် သက်ဝင်ရှင်သန်လာခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ ဖောင်ကို တောင်းဖြည့်ရင်း အရွေးခံရပါ့ဆိုသည့် စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ရင်တမမ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကာ နောက်ဆုံးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
“သင်တန်းပြီးရင်တော့ ရည်ရွယ်ထားတာကတော့ နောက်ထပ် အဆင့်မြင့်သင်တန်းတွေထပ်တက်ဖို့ရှိတယ် အခုကျတော့ အခြေခံအဆင့်ဘဲအောင်မြင်တယ်လေ ဒါပေမယ့် ပညာဆိုတာကတော့ ဘယ်လောက်ရှာရှာမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော် ဆက်တက်ဖို့ရှိတယ်။ သို့ပေသော်ငြားလည်း မိသားစုနဲ့တစ်ဖက်ဆိုတော့ အခက်အခဲများရှိနိုင်မလားပေါ့နော် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ခြား ပရဟိတအလုပ်လည်း လုပ်နေသေးတယ်လေ အဲ့တာနဲ့ တစ်ကယ်လို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အခွင့်အရေးက မရလာဘူးဆိုရင်တော့ အိမ်မှာဘဲ ဒီတတ်ထားတဲ့ အခြေခံပညာအဆင့်နဲ့ဘဲ ပြန်ပြီးတော့ ဆက်ချုပ်ဖြစ်မှာပါ။ အဲ့တာကတော့ ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်” ဟုလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမအနေနှင့် ယခုကဲ့သို့သော သင်တန်းများကို ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေးစေလိုကြောင်း ၊ စက်ချုပ်နှင့် စက်ပြင်သင်တန်းအပြင် ကျေးလက်နေ မောင်ငယ်ညီမငယ်များသည် ဖက်ရှင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတနည်းပါးနေသေးသောကြောင့် အလှပြုပြင်ရေးကဲ့သို့ သင်တန်းများကို နောင်တွင် ဖြစ်နိုင်လျှင် ထည့်သွင်းပေးစေလိုကြောင်း ဆန္ဒပြုရင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းကာလ ၃လအပေါ် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိကြောင်းပြောပြရင်း အင်တာဗျူးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
“Dreams come true” says Naw Caroline. in Nyaung Pin village, Kayin State, her dream is to becomeatailor. One day her dream came true throughavocational center established by swiss contant and implemented by Local Resource Centre nearby her township. She imaginably sings up to sewing. In her daily commute 30 to 40 minutes from her village.
Her life dream has been to become tailor and opportunity didi not exceed in the past. However now she is selected to and joined the sewing class. She can now follow her dream, thanks to the village leader who informed her and encouraged her to join. And was very excited when chosen. “ This is just the beginning my new life and this is only the basic class I will sure the advance class and becomeasuccessful tailor and hopefully to establishahome base tailor shop . So that she can helpful and take care of her family.